That's so good, right?: Step Brothers
ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက သူ့ရဲ့အသွင်အပြင်တွေ လူကြီးဖြစ်လာမှုတွေကို အမြဲစောင့်ကြည့်နေဖြစ်ခဲ့တာဗျ။ ရွှင်ပျသွက်လက်သော သူ့ရဲ့ သဘောထားဟန်ပန်တွေက ကျွန်တော့်ကို အမြဲဆွဲဆောင်ညှို့ယူနေတတ်ခဲ့တာပေါ့။ ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက ဖိုးသန့်ရှင်းလေး ဇေယျာ ဟာ တဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်လာတော့ အရပ်မြင့်မြင့် ဖြူဖြူသန့်သန့်နှင့် ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်ဖြစ်လာသူပေါ့။ ကောင်မလေး တွေခမျာ သူမဆွတ်ခင်က ညွှတ်ချင်နေကျသူများပါတယ်။ တက္ကသိုလ်မှာ စံပယ်ဖြူနှင့် မတွေ့ခင်အထိ ရှူးဖိနပ်မ၀တ်ခင် ခြေအိတ်လဲ လှယ် သလိုကို လဲလှယ်နေတတ်ခဲ့တာပါ။
သူတို့နှစ်ဦးချစ်သူဖြစ်သွားကြတော့လည်း နတ်ဖက်တဲ့စုံတွဲလို့ ပြောလို့ရတဲ့အထိ လိုက်ဖက်ညီလှပါရဲ့။ စံပယ်က သွက်လက်ထက်မြက်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တာနဲ့အညီ ဇေယျာကို ဘယ်လိုထိန်းရမယ်ဆိုတာ သိဟန်တူရဲ့။ ကျောင်းမှာလည်း တတွဲတွဲနှင့်ပေါ့။ မာမီ တို့နှင့် ခေါ်တွေ့ပေးတဲ့နေ့ကများ အိမ်မှာ ရယ်မောသံတွေ လွှမ်းနေရော။
Sweet December ရဲ့နေ့လေးတစ်ရက်မှာ သူတို့လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ မာမီတို့ခမျာ သူတို့အချစ်ဆုံးသားလေးပျော်နေတာ မြင်ရ တော့ ၀မ်းသာပြီး စိတ်ချမ်းသာနေကျတာ ကျွန်တော်လည်းအပါအ၀င်လေ။
ဇေယျာ...ဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင်စွာ အချိန်အတော်ကြာလေနေသေးတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကိုယ်သူ စီးပွားရေးထဲမှာ နှစ်မြှုပ်ပစ်လိုက်ရင်း ၀မ်းနည်းမှုကနေဆွဲထုတ်ပစ်လေရဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျောင်းပြီးပြီးခြင်း အစိုးရ၀န်ထမ်း အဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့တာ ပင်လယ်ကမ်းခြေ မြို့လေးမှာ အခြေကျနေပါပြီ။ အဲဒီကတည်းက ချစ်လှစွာသော ညီကလေး ဇေယျာနှင့် မတွေ့ဖြစ်တာ ၅နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ မနေ့က ဖုန်းလာတယ်....ဒီကမ်းခြေမှာ သူ့စီးပွားရေးအကွက်အကွင်း ရှာရင်း ကျွန်တော့်ဆီခဏနေမယ်တဲ့။
တံခါးဘဲလ်မြည်သံကြောင့် တံခါးမကြီးဆီ လှမ်းအသွားမှာတော့ မောပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့ ပန်းလျအသွင်နဲ့ဇေယျာ့ ကိုမြင်လိုက်ရပါတော့ တယ်။ ဇေယျာ ပုံစံက ညှဉ်းသိုးသိုးနဲ့ အ၀တ်အိတ်တွေမှာလည်း ရွှံ့တွေနဲ့ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်တွေကိုဆန့် ရင်ခွင်ကိုဖွင့်လိုက်ရင်း သူ့ကိုကြိုဆိုဖြစ်ခဲ့ပေါ့။ မိုးရေထဲမောင်းလာခဲ့ရတော့ ရွှံ့တွေလည်းကားမှာပေ လူလည်းမောပန်းနေပုံဆိုတော့ ရေချိုးခန်းကို ချက်ချင်း ညွှန်ပြလိုက်ရတာ ရေပူနဲ့ချိုးဖို့ကိုလည်း လှမ်းပြောလိုက်ရပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ညစာစားဖို့ပြင်ဆင်လေသတည်းပေါ့။
သူသွေးနွေးသွားစေဖို့ ရေချိုးပြီးပြီးခြင်းသောက်ဖို့ ရမ်တစ်ခွက်ငှဲ့လိုက်ရင်း ရေချိုးခန်းထဲက ထိုင်ခုံလေးဆီယူဆောင် အလာ ဖန်တုံးတွေနဲ့ ကာထားတဲ့ရေချိုးခန်းထဲက ရေချိုးနေဆဲ ဇေယျာရဲ့ ကိုယ်လုံးပုံရိပ်ဝိုးတ၀ါးကို ရင်ခုန်ဖွယ်မြင်မိရ ပေါ့။ သူ့ကြည့်ရတာ ရေနွေးနွေးတွေ ကြား အညောင်းအညာဖြေနေဟန် အနည်းငယ်ကြာကြာရပ်နေလေ့။ ရေစက်တွေက သူ့ကျောပြင်ကြား တလိမ့်လိမ့်ဆင်း.....။
အတန်ကြာငေးမိပြီးနောက် ချက်ပြုပ်ပြင်ဆင်လက်စ မီးဖိုခန်းဆီပြန်လာဖြစ်ပါတယ်။ Shampoo နံ့သင်းသင်း၊ တီရှပ်တစ်ထည် ကိုယ် မှာစွပ်ကာ boxer ဘောင်းဘီတိုနှင့်ဇေယျာပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ ဘယ်လောက်ချောမောခန့်ငြားတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့သူ လေးလည်း။ သူ့လက်ထဲမှာတော့ ကျွန်တော်ထားခဲ့တဲ့ ထည့်ထားသောဖန်ခွက်က နေရာယူထားပြီး အဲဒါကို တစ်ငုံခြင်းသောက်ကာ တွေ့စကထက်ပိုပြီး သွက်လက်အသက်ဝင်လာတဲ့ဟန်ပန်ဖြင့် မီးဖိုနားလှမ်းလာပါတော့တယ်။
စားပွဲခုံပေါ် စားဖွယ်ရာတွေပြင်ဆင်ပြီးချိန်မှာတော့ အတူထိုင်ကြကာ ပြောမကုန် သတင်းစုံပြောရင်း စားသောက်ကျ ပါတော့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဧည့်ခန်းထဲက ဆိုဖာဆီရွှေ့ဖြစ်ကြကာ ပြောနေတဲ့စကားအကြောင်းအရာကလည်း စံပယ့်အကြောင်းတွေဆီပြောင်းလဲ သွားပါပြီ။ ခဏအကြာမှာတော့ သူ့မျက်ဝန်းတွေမှာ မျက်ရည်တွေရစ်သီလာပြီး နောက် စံပယ့်အဖြစ်ဆိုးတွေ သူပြောပါရော။ သူရုတ်တ ရက်စကားဆိုတာကိုရပ်လိုက်ကာ ငိုရှိုက်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော် သူ့အနားကပ်ထိုင်လိုက်ကာ ပခုံးတွေကိုဖက်တွယ်လိုက်ကာ နှစ်သိမ့် ပေးမိတော့ သူကျွန်တော့်ကိုပြန်လည် ဖက်တွယ်လိုက်တာ ကျစ်ကျစ်ပါရော။ သူ့လက်များဟာ ပခုံးများမှ ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းဆီ တဖြည်း ဖြည်းပြောင်းကာ သူ့ဆီဆွဲယူလိုက်ရင်း အနမ်းတစ်ချက်ပေးလိုက်တာ နှုတ်ခမ်းများဆီကို.....ကျွန်တော်...ကျွန်တော် တကယ့်ကို shock ဖြစ်သွားတယ်။
အစတော့ ဘာလိုလိုနဲ့ ဆွဲဖယ်မိပါသေးတယ်။ နောက်တော့ အသာငြိမ်ပြီး သူ့နှုတ်ခမ်းရဲ့နုညံ့မှုမှာမျောပါလေ့။ ဇေယျာ ကျွန်တော့် မျက်နှာက အသာခွာကာ မျက်ရည်အပြည့်ဖြင့် ဆောရီး ဇော် ၊ ညီ့စိတ်တွေဘာဖြစ်နေမှန်းမသိဘူး ကျွန်တော်ပြောဖြစ်ရတာက အိုကေ ပါကြောင်း၊ သူစိတ်သက်သာရာရဖို့လိုအပ်နေတာကို နားလည်ပါကြောင်းပေါ့။ နောက်ထပ်တစ်နာရီလောက် စကားဆိုကြပြီးနောက် သမ်း ဝေလာကြကာ အိပ်ခန်းဆီသွားဖို့ အနားယူဖို့ဆုံးဖြတ် ကြပါရော။ ကျွန်တော်တို့ အိပ်ခန်းဆီရောက်တော့ ဇေယျာ့ကို အိပ်နှင့် ရေချိုးလိုက် ဦးမယ်လို့ပြောရင်း ရေချိုးခန်းဆီလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ ရေချိုးခန်းထဲ ၁၀မိနစ်လောက်ကြာပြီးနောက် ပြန်ထွက်လာတော့ ဇေယျာက အိပ်ယာ ပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေပြီ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ဘေးမှာ အသာလှဲလျောင်းကာ ဇေယျာဘာကြောင့် အဲဒီ့အနမ်းကို ချွေရသလည်း ၊ ခဏဖြစ် ပေါ်လာတဲ့ သူ့ခံစားချက်သက်သက်အတွက်လား။ အားလုံးဆင်ခြင်ကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးသည် Straight Guys တွေ ညီအစ်ကိုရင်းလိုခံစားချက်မျိုးကြတော့လည်း.....ပြောရခက်သားပါ။
ကျွန်တော်တို့ လှဲလျောင်းနေရင်း ဇေယျာ့ရဲ့ အိပ်မောကျနေမှုကို သိနေရသလို တဖြည်းဖြည်းသိရှိခံစားလာရတာကတော့ သူအကြောင်း အရာ တစ်ခုခုကို အိပ်မက်နေတယ်ဆိုတာ။ ရုတ်တရက် သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတိုးကပ်လာသလို ကျွန်တော့်ကိုဆွဲဖက်ပါရော။ ကျွန်တော့် ပေါင်တံတွေဆီမှာတော့ သူ့တင်ပါးရဲ့လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ ငပဲရဲ့မာတောင်လာမှုကို ခံစားရပါပြီ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ တစ်မျိုးတစ်မည်ဖြစ်လာ တော့ကာ သူ့ပေါင်ခြံဆီလက်လှမ်းလိုက်မိပါတယ်။ ပူနွေးမာတောင့်နေတာ....ဘယ်တုန်းကမှ တစ်ခြားယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ အင်္ဂါ ကိုမကိုင်တွယ်ဖူးတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အထူးအဆန်းပါ။ အသာအယာ ကိုင်တွယ်မိရင်းပြောနိုင်တာကတော့ အတော်အသင့်ကြီး တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်တော့်ထက် အတော်ရှည်သလို တုတ်လည်းတုတ်သည်။
လက်နှင့်ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကြောင့်ထင်ပါရဲ့ သူ့ညှောင့်ချက်တွေဟာ တစ်မျိုးတစ်မည်ဖြစ်လာပြီး လက်မှာလည်း pre-cum တစ်ချို့ စွတ်စို စပြုလာပါတယ်။ သူ့ဆောင့်ချက်တွေဟာ ကျွန်တော့်လက်အစုံကြားသွက်သထက်သွက်လာသလို ပါးစပ်က ညည်းတွားမှု သံစဉ်တွေဟာ လည်းမြန်ဆန်လာပါတော့တယ်။ ခဏအကြာမှာတော့ ပူနွေးတဲ့အရည်တွေဟာ ကျွန်တော့်လက်အစုံထဲ စိုရွှဲသွားပါတော့တယ်။ ကျွန်တော် အတန်ကြာငြိမ်သက်နေမိပြီးနောက် လက်ချောင်းတွေကြားက အရည်တွေကို လျှာနဲ့တို့ထိကြည့်မိပါတယ်။ အရသာတစ်မျိုးပဲ...မဆိုးဘူး လို့ ခံစားရမိတော့ လက်ပေါ်ကဟာတွေကို ကျွန်တော့်လျှာနဲ့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်မိရပေါ့။
ဇေယျာကတော့ တဖက်စောင်းသွားကာ အိပ်မောကျလေရဲ့။ ကျွန်တော့်မှာသာ စိတ်တွေ ကယောက်ကယက်လေ။ တစ်ခြားယောက်ျား တစ်ယောက်ရဲ့ ငပဲကိုကျွန်တော့်ပါးစပ်နဲ့ စုပ်ပြုရရင်ဘယ်လိုဖီလင်များခံစားရမှာလည်းတွေးတောမိ ကာ ကျွန်တော့်ငပဲဟာလည်း မာ ထောင်လာတော့ ညာလက်ငါးချောင်းနှင့် အပြည့်အ၀ဆုပ်ကိုင်ကာ pumping လုပ်ရလေပေါ့။ အိုး....တစ်ယောက်ယောက်ဘေးမှာထားပြီး ထုရတဲ့ဖီလင်ကမိုက်တယ်။ ခဏနေတော့ ခံစားမှုအဟုန်မြင့်ကာ ကျွန်တော့်လက်တွေ၊ ရင်ဘတ်တွေစိုရွှဲရပြန်ပေါ့။ ကိုယ်ပိုင်အရည်တွေကိုလည်းလျက်ကြည့်မိပြန်တော့ အရသာကတစ်မျိုးပဲ။ ဇေယျာ့ဟာနဲ့မတူဘူး။ မျက်ခွံများဟာလေးလံလာကာ အိပ် မောကျသွားရတာပေါ့အတော်ကြာတော့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်လက်အစုံကို လှုပ်ရမ်းမှုနှင့်အတူ လတ်ဆတ်သင်းပျံ့တဲ့ကော်ဖီနံ့ကြောင်း မနက်ခင်းမှာနိုးထခဲ့ရပါပြီ။
ညနေပိုင်းရောက်တော့ ဇေယျာကျွန်တော့်ကို စားနေကျဖေးဘရိတ်အစားအစာဖြစ်တဲ့ ဆူရှီနှင့် သူစားနေကျ ပန်းဂျုံခေါက်ဆွဲကိုတစ်ဝစား ဖို့ ခေါ်သွားပါတယ်။ မြို့လေးရဲ့အနောက်ဘက်ပိုင်းက 'Zephyr' ဆိုင်လေးကို။ ကောင်မလေးအချို့က သူ့ကိုငမ်းကြပေမဲ့ သူကတော့မသိ သလို ဖာသိဖာသာပါပဲ။ စားသောက်ပြီးကြတော့ ကျွန်တော့်တိုက်ခန်းဆီပြန်လာကြတယ်။ တနေကုန်တိုက်ခန်းပတ်ရှာရတာကြောင့် ပင် ပန်းပြီးအိပ်ချင်ပြီဆိုကာ အိပ်ခန်းဆီသွားပါတော့တယ်။ သူကတီရှပ်တစ်ထည်နှင့် ဘောင်းဘီတိုနှင့်လှဲလျောင်းချိန်မတော့ ကျွန်တော်က အ၀တ်မပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ယာဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူက အဲဒီလိုအမြဲအိပ်နေရင် ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းဘူးဆိုပဲ။ ဒီလို အိပ်တာ ပုံမှန်ဖြစ်နြေ့ပီလို့။ ဒါဆိုလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်သာအိပ်တော့ သဘောရှိတဲ့။
သူစိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားခရီးသွားဆောင်းပါးပေါင်းချုပ်စာအုပ်တွေပေါ့။သူက ဖတ်ပြီးဟိုနေရာဒီနေရာကဘာ ဆိုတာစပ်စုရတာ ကြိုက်တယ်လေ။ ကျွန်တော်ကတော့ စာဖတ်ရင်း နေရာသစ်ဆီရောက်သွားရတာကိုသဘောကျလို့ ၀ယ်စုထားဖြစ်တာပါ။
နည်းနည်းတော့ စိတ်လှုပ်ရှားရတာပေါ့။ ကိုယ့်ညီအစ်ကိုလိုဆက်ဆံလာသူတစ်ယောက်ရှေ့မှာ လုပ်ရမှာဆိုတော့။ အို....ဘာပဲဖြစ် ဖြစ်....ရင်ဘတ်ပေါ်လွှမ်းထားတဲ့ စောင်ပါးကို လှပ်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်ညီဘွားကို လေညှင်းခံလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော် သူ့ငပဲကို အသာကိုင်လိုက်ရင်း တဖြည်းဖြည်းပွတ်သပ်ပေးကာ မျက်ဝန်းတွေဆီကြည့်မိရတော့ သူ့ခမျာမှေးမှိတ်သွားပြီး ခေါင်းအုံးပေါ်ကို လှဲလျောင်းလိုက်တော့တယ်။ လက်နှစ်ဖက်နှင့်စုံကိုင် အသာအထက်အောက်ရွှေ့ပေးတော့ သူ့တင်ပါးစုံဟာ လှုပ်ရှား လာပြီး အသွင်းအထုတ်လုပ်တော့တာ။ တိုးဝင်လိုက် ထွက်သွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ငပဲရဲ့ထိပ်မှာ အရည်ကြည်လေးတွေစို့လာတော့ ကျွန်တော့်အဲ့ဒီအရသာကို ပြန်လည်ခံစားမိချင်ပါရော။ နည်းနည်းညောင်းလာတော့ အိပ်ယာပေါ်အသာမှောက်လိုက်တာမှာ သူ့ငပဲဟာ ကျွန်တော့်မျက်နှာဆီ အတည့်ချိန်ရွယ်ထားတာကလား။ လျှာလေးကိုအသာထုတ် ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်ဝက အရည်ကြည်လေးကို တို့ကြည့် တော့ ငန်ကျိကျိနဲ့ sweet butter အတိုင်းပါပဲ။ ကျွန်တော့်လျှာကလေးရဲ့ ကလိမှုမှာ သူပါလာပြီးနောက် နှုတ်ခမ်းလွှာ တွေကြားထဲထိုး သွင်းဖို့ကြိုးစားပါလေ့ သူက။ သူ့ငပဲကို အသာသွင်းလာတော့ ကျွန်တော်ကွမ်းသီးခေါင်းကို ရှလွတ်ကနဲစုပ်ယူလိုက်တာ ဇေယျာလေ 'Oh yeah!' တဲ့။ ကျွန်တော်သူ့ကွမ်းသီးခေါင်းကိုနဲ့ အပေါက်လေးမှာ လျှာကစားရင်း ပါးစပ်ထဲ အသွင်းအထုတ်ပြုရင်းတွေးမိရတာက 'ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ -ီးကို ငါစုပ်နေပါလားလို့' ဒီဖီလင်ရဲ့ အဆုံးစွန်ဟာ ဘယ်လိုနေလည်းသိချင်တယ်၊ ကျေနပ်အရသာခံစား ကြည့်ချင်တယ်။
နူးညံ့ရီဝေတဲ့ မျက်ဝန်းအစုံက ကျွန်တော့်ကို ကြင်နာစွာစိုက်ကြည့်ရင်း အောက်ပိုင်းစီကိုရွေ့သွားကာ ကျွန်တော့်ငပဲကို မြင်သွားတော့ 'ဇော်....မင်းဟာကို စုပ်ကြည့်ရမလား?' ကျွန်တော် ဘာမှပြန်မပြောဘဲ အိပ်ယာပေါ် နောက်ပြန်လှန် အသာလှဲလိုက်ရင်း ပေါင်တွေကား ပေးလိုက်တော့ အပြည့်အ၀ကိုမာထောင်ပြီး သူ့အတွက်မိုးပေါ်ထောင်နေရော။ ဇေယျာ ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံဆီ မျက်နှာမူလိုက်ရင်း ငပဲကို အသာကိုင်ကာ အတံတစ်လျှောက် တရွေ့ရွေ့လျှက်ပါတော့တယ်။ ထိပ်ဝကိုလည်း ကလိသေးရဲ့ ။ ပါးစပ်ကို ဟကာ တဖြည်းဖြည်းမျိုချ လိုက်တာ သူ့လည်မျိုထဲရောက်သွားပြန်တော့ သူအသာငြိမ်နေကာ ခဏနေတော့ သူ့ခေါင်းကို လှုပ်ရှားပါတော့တယ်။
'Wow! ဒီဖီလင်၊ ဒီစိတ်ကျေနပ်မှုမျိုးမရတာ ကြလှပါပေါ့'
သူ့လျှာဖျားဟာ ကျွန်တော့်ငပဲရဲ့ ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်ဝဆီလျှာစက်ဝန်းလှည့်နေတာကို ခံစားနေရတာ။ ပြီးတော့ ထိပ်ပိုင်းကို အသာငုံပြီး စုပ်နေတာဟာလေ....တစ်ခြားကမ္ဘာသစ်ဆီ ကျွန်တော်ရောက်သွားရပါရော။
ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေထဲမှာ တုန့်ပြန်မှုတွေ၊ တုန်ခါမှုတွေဟာ တဆတ်ဆတ်ခါ။ ကျွန်တော်ပြီးဆုံးတော့မယ် ပန်းတိုင်ရောက်တော့မယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရပြီ။ ဒါကြောင့် ဇေယျာ့ပါးစပ်ထဲက ဆွဲထုတ်ပြီး သကာလ 'Whoa..ငါပြီးတော့မယ်ကွ' ပြောလိုက်တော့ သူကြည့်ဖူးတဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲ ကအတိုင်း လုပ်ကြရအောင်တဲ့။ 'ညီကြည့်ဖူးတဲ့ 'Deep Throat' ဆိုတဲ့ကားထဲမှာ Linda Lovelace ဆိုတဲ့မင်းသမီးကလေ ဘဲကြီးတစ်ပွေ့ ဟာကို စုပ်မျိုတာ သူ့နှာခေါင်းနဲ့ balls တွေထိတဲ့အထိပဲ။ သူတို့နေတဲ့အနေအထားက ညီတို့နဲ့သင့်တော်မယ့်ပုံ 69ပုံစံဗျ။ ဘာကြောင့်ဆို တစ်ချိန် တည်းမှာပဲ အဲဒီ့ဘဲက အသားဖုလေးကို လျှာနဲ့ကလိပြီးစုပ်နေတာ'
အရှိန်ရနေဆဲမှာပဲ အိပ်ယာပေါ်က အသာထ ရေချိုးခန်းထဲသွား ဆေးပစ္စည်းတွေထည့်ထားတဲ့ ဘီရိုအသေးလေးထဲက Lube ဘူး အချို့ ကိုယူက အိပ်ယာပေါ်ကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ချစ်လှစွာသော ညီကလေးရှိရာဆီပေါ့။ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းတွေမှာ Lube နည်းနည်းစွတ် ကာ အနေအထားပြန်ယူလိုက်ပါတယ်။ မပျော့သေးတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့အာခံတွင်းထဲ အဆုံးထိဖိထည့်လိုက်သလို သူ့ငပဲကိုလည်း အလားတူလုပ်ပေးမိပေါ့။ တစ်ခုပိုတာကတော့ ချောဆီစွတ်ထားတဲ့ လက်ချောင်းထဲက တစ်ခုကို သူ့ချယ်ရီပေါက်ထဲ အသာထိုးထည့် တော့ အစပထမ သူအော်သေးတယ် ခဏနေတော့ ပြေလျော့သွားပါရဲ့။ အသာလေးအသွင်းအထုတ်လုပ်နေရင်း ဒုတိယလက်ချောင်းကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းသွင်းလိုက်တယ်။ အိုကေပြီဆိုတော့မှ သူ့ကို ကလိတာ သူ့ငပဲက ငေါက်ကနဲ ငေါက်ကနဲ ခေါင်းငြိမ့်သည်သာမက နှုတ်ဖျား ကလည်း Ummmmm တဲ့။ ခဏနေမှာတော့ ဆတ်ကနဲတုန်ခါသွားတဲ့ သူ့ငပဲက ချွဲပစ်ပစ်အရည်တွေ ကျွန်တော့်လည်ချောင်းထဲရောက် ကုန်ရော။ အ သာဆွဲထုတ်လိုက်ရင်း ထိပ်ပေါက်ဝကို လျှာနဲ့ထပ်ကလိတော့ ကျန်ရှိပစ္စည်းတွေ ပန်းကနဲ ထုတ်လိုက်တာ နှုတ်ခမ်းဖျား ပေါ်ကျကုန်ပါ ရော။ 'အာ...အ...အ' အခုတော့ သူ့cum ရဲ့အရသာကို မြည်းစမ်းနိုင်ပြီ။ 'သောက်လေ ငတ်မပြေ' ဆိုတဲ့အရသာမျိုးပါပဲ။
ကျွန်တော်သိတယ် သူအာသီသပြည့်ဝသွားပြီဆိုတာ။ ဘာကြောင့်ဆို သူကျွန်တော့်ငပဲကို ကွမ်းသီးထိဆွဲထုတ်လိုက် လည်မျိုထဲထိ ဖြည်း ဖြည်းသွင်းလိုက် လုပ်ပေးနေရာမှ ခပ်သွက်သွက် ကစားပေးရင်းလျှာသရမ်းတော့တာ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး တဖျင်းဖျင်းဖြစ်သွားရကာ သူ့လည်မျိုထဲအဆုံးထိရောက်စဉ်ခဏ ရွှေဥထဲ မကျန်တော့လောက်အောင် ပန်းထည့်လိုက်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်ပြီးသွားမှန်းသိတော့ ဆွဲမထုတ်သေးဘဲ ခဏငြိမ်နေပြီးမှ အနည်းငယ်ဆွဲထုတ်ကာ ကွမ်းသီးခေါင်းကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့် cum တွေကိုမျို ချလိုက်ပြီး ထိပ်ပေါက်ဝလေးကို လျှာဖျားနဲ့ကလိနေသေးတော့တာ။
နှစ်ဦးသား ခုတင်ပေါ်မှာ ခဏတာ ပက်လက်လှန်ရင်း အမောဖြေအနားယူဖြစ်ကြတာပေါ့ ခဏတော့။ ဇေယျာက 'ဇော်....ညီတို့ ဒီလိုလုပ် ဖြစ်တာ အတော်ဆိုးတဲ့အဖြစ်လို့ ထင်လားဗျာ?'
'ငါတို့ စမ်းသပ်ချက်၊ ဟုတ်တယ် ကလေးသူငယ်တွေ အရွယ်ရောက်ချိန်မှာ သိချင်စိတ်တစ်ခုကို စမ်းသပ်တဲ့ ပုံစံမျိုးပါပဲ။ ဟိုးငယ်ငယ် တုန်းက ငါတို့လုပ်ဖူးခဲ့သလိုမျိုး ပြန်ဖြစ်ခြင်းသက်သက်လေ'
နောက်တော့....သူ့လက်မောင်းတွေဟာ ကျွန်တော့်ကို ရစ်ပတ်နှောင်တွယ်လာကာ နှုတ်ခမ်းတွေအား အနမ်းချွေပြီးနောက် ....'I love you, brother.'...။